Thread: jrefrmhwyfrawmftaMumif; odaumif;p&m
စာရေးဆရာဗိုလ်မှုး တင်သန်းဦး. (ကွှယ်လွန်)ဗိုလ်မှုးကြီးသူရမြင့်တိုး ။ဗိုလ်မှုး ကိုကိုကြီး.
ဗိုလ်မှုး မင်းဟန်……. ရက်ပေါင်း ၄၀ တိုက်ပွဲကိုအတိကျ ဖြစ်အောင်စုစည်းရာမှ ရက်ပေါင်း ၄၀ စာပြောပြပေးခဲ့သော ဗိုလ်မှုးကြီးများကို ယခုဆောင်းပါးဖြင့် ဂါဝရ ပြုလိုက်ရပါကြောင်း ။
(၁၉၁၉) ခုနှစ်သည် တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသည့်နှစ်တနှစ်ပင်တည်း။ ထိုနှစ်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးကုမ္မာရီအသင်းကို စတင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့သလို၊ (၁၉၁၉)ခုနှစ် မေလ (၁၈) တွင် ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းချုပ် အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပ၍ မြန်မာ ပြည်သူတို့လိုလားသောအုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုရန်အတွက် အင်္ဂလန်သို့ ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ ဖေ၊ ပု၊ ရှိန် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ (၁၉၁၉) ဇူလိုင်လ (၇) တွင် သင်္ဘောဖြင့်သွားရောက်ကာ အင်္ဂလန်ပြည်၊ လန်ဒန်မြို့တွင် ခုနစ်လကြာမျှနေထိုင်လျက် မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေးနိမိတ်တဘောင်ကို အတိတ်ဆောင်ခဲ့သောနှစ်တနှစ်လည်း ဖြစ်ပေတော့သည်။ မြန်မာ့မြေ၊ မြန်မာ့ရေကို ကျွန်ပြုအုပ်စိုးထားသည့် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ဘုရား၊ ကျောင်းကန်များ တွင်”မည်သူမျှ ဖိနပ်မစီးရ“ အမိန့်ကို (၁၉၁၉) ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၂၉) ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးစေခဲ့သည်အထိ မြန်မာတို့၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လို့ လာခဲ့ချေပြီ။ ထိုကဲ့သို့ အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်းများဖြင့် မင်္ဂလာကျက်သရေရှိသည့် (၁၉၁၉) ခုနှစ်တွင် တောင်ဇလပ်ပန်းများဖူးပွင့်ရာ
သူ့အား စစ်သွေးစစ်မာန် ပြင်းထန်ထက်မြက်လှသည့် တောင်ပိုင်ကြီး ဘွိုင်ကူလ်၏မျိုးရိုးမှ မီးရှူး သန့်စင်ခဲ့ကာ သမီး(၆) ယောက်အလယ်၌ တယောက်သာ ထွန်းကားခဲ့သည့် သားရတနာလေးတဦး ဖြစ်လေ၏။ ဖလမ်းမြို့အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး (၁၉၃၉)ခုနှစ်၊ သူ့အသက် (၂၀)ပြည့်ချိန်တွင်မေမြို့ရှိ ဘားမားရိုင်ဖယ်တပ်ရင်း(၂)၌ သာမန်စစ်သည်ဘဝဖြင့် သူ၏ တပ်မတော်သားဘဝကို စတင်ခဲ့လေတော့သည်။
ထိုအချိန်တွင် သူ၏အသက်အရွယ်မှာ (၂၆) နှစ်သာသာမျှပင်ရှိသေးသည်။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေးကာလတွင်တော့ ဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးဖြင့် ပြည်ထောင်စုတည်မြဲရေးအတွက်
စွန့်စွန့်စားစား ဆက်လက်အမှုထမ်းရင်း အင်းစိန်တိုက်ပွဲ၌ အထူးနာမည်ကြီးခဲ့ပြန်တော့သည်။ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့တံဆိပ်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံရသူ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းတည်းဟူသော သစ္စာရှိချင်းတိုင်းရင်းသားစစ်သည်ရဲမက်များနှင့်အတူတကွအင်းစိန် ကျမ်းစာသင်ကျောင်းကုန်းတိုက်ပွဲ၌ ကျည်ဆန်များအကြား
" ဟေ့ ... တိုက်ချွန်း၊ ဘာဖြစ်လို့ ပြန်လှည့်ရမလဲ။လူဆိုတာ တသက်မှာ နှစ်ခါမသေဘူးကွ။မင်း သေရမှာကြောက်သလား။ မင်းကို သတ္တိရှိတယ်ဆိုပြီး ငါ့အနားမှာ ခေါ်ထားတာ " ဟူ၍......။
ရန်သူ၏ ပစ်ခတ်မှုကို တုံ့ပြန်နေရသော်ငြား လက်နက်အင်အားနှင့် လူအင်အားမှာ အပြတ်အသတ်ကွာခြားလို့နေသည်။ ရန်သူ့ပစ်အားနှင့်ယှဉ်မည်ဆိုပါက ကျည်ပစ်အားအလွန် ကွာခြားလွန်းနေပေသည်။ ရန်သူတို့ချုံခိုတိုက်ခိုက်ချိန်နှင့်တပြိုင်တည်း ကားကိုရပ်၊ ကားအောက်ဆင်း၍ နေရာယူ၊ ပြန်လည်ခုခံပစ်ခတ်မှုမှာ အချိန်အားဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်။ ရန်သူ၏ ကြိုတင်နေရာယူပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဗိုလ်ကြီးလှမုန်း ရန်သူ့ကျည်သင့်သွားသော်လည်း ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ပါချေ။ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟရန်သီယို မှာတော့ ပေါင်တွင်ကျည်ဆန်ထိမှန်သွားခြင်းကြောင့် နေရာမှမထနိုင်တော့.......။ဒဏ်ရာရထားပြီးသူ နှစ်ယောက်နှင့်အတူ ရန်သူအားရေရှည်ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် ကျည်အင်အား၊ လက်နက်အင်အားလည်း မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ဗိုလ်တိုက်ချွန်းနှင့် တပ်ကြပ်ဟိုခါးတို့နှစ်ဦးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှ အတင်းဖောက်ထွက်လျက် နောက်တန်းတပ်ရင်းသို့
" ငါတော့ ခွ(ဂွ)ကျတာပဲ...။ ဆေးရုံကဆင်းရင် ခြေထောက်တဖက်မရှိပဲနဲ့ .. ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘောလုံးကန်မလဲကွ... " ဟူ၍ပင် ဟာသနှောလိုက်ပြန်လေသေးတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ သတ္တိဗျတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသော ဗိုလ်မှူးကြီးဟရန်သီယို တယောက် ခဲဆိပ်တက်နေသော ပေါင်မှဒဏ်ရာကြောင့် ထိုနေ့ညနေ (၃)နာရီ(၅၀)မိနစ်အချိန်တွင် သူချစ်ခင်သော ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့် သူတွယ်တာခင်မင်ရာ တပ်မတော်ကြီးကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် စွန့်ခွာလျက် သူရဲကောင်းစစ်သည်တို့၏ နားခိုရာဘုံဗိမ္မာန်သို့ ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။ သူကျဆုံးချိန်တွင် သူ၏အသက်မှာ (၃၀) ဝန်းကျင်မျှသာ.........။
တာဝန်ကိုဦးလည်မသုံထမ်းရွက်သွားသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟရန်သီယိုသည် မတရားမှုကို အနည်းငယ်မျှပင်လျှင် မနှစ်သက်။ တပ်ထဲတွင် အဆင့်အတန်းမရွေးပဲရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သဖြင့် အရာရှိ၊အရာခံ၊အကြပ်၊ တပ်သားအားလုံး၏ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို ခံခဲ့ရသူတဦးပင်။ သူ၏ ရာထူး၊ ဂုဏ်ရှိန်အတွက် မာနတက်မှုလည်း မရှိ၊ စကားကို ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပြောတတ်ပြီး သတ္တိအရာ၌ ပြောင်မြောက်လှသူတဦးဖြစ်ပေသည်။ မဟုတ်မခံရာ၌လည်း မကြုံစဘူးထူးကဲအောင်ရှိသည်ဟူ၍ သူနဲ့အတူလက်တွဲလျက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့်နီးစပ်သူများအားလုံးက မှတ်ချက်ချရသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းပီသစွာဖြင့်
နေ့ကို လစား၊ လကို နှစ်စားရင်း အချိန်ကာလ သက္ကရာဇ်မိုင်တိုင်များ မည်၍မည်မျှပင် ရွေ့လျားပြောင်းလဲခဲ့စေကာမူ " တောင်တန်းမြေမှ ကြယ်တပွင့်" သည် ဤနိုင်ငံ၏သမိုင်းစာမျက်နှာများထက်တွင် အစဉ်လင်းလက်တောက်ပနေမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
၁။(စစ်နှလုံးဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၆ - ၁၉၄၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ) ၂။တက္ကသိုလ်တင်စိန် - အောင်ဆန်းသူရိယဗိုလ်တိုက်ချွန်း
အာရှတိုက်စစ်မြေပြင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို မဟာမိတ်တပ်များ ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲချိန်နှင့် ပြည်တွင်းမှ မြန်မာမျိုးချစ်များက ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်ချိန်တွင် H.M.S FAL သည် ဗမာပြည် ဘုရင့်အပျော်တမ်း အရန်ရေတပ်မတော် (BURMA ROYAL NAVY VOLUNTEER RESERVE) မှ မြန်မာအမျိုးသား ရေတပ်သားများနှင့်အတူ
၁၉၄၇ ခုနှစ် မေလ(၂၅)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ (၁၂၁၀) နာရီအချိန်တွင်တော့ H.M.S FAL သည် ဗြိတိသျှ တော်ဝင်ရေတပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရာမှ ဗမာပြည် ဘုရင့်အပျော်တမ်း အရန်ရေတပ်မတော် (BURMA ROYAL NAVY VOLUNTEER RESERVE) ထံသို့ အခမ်းအနားဖြင့် လွှဲပြောင်းရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့သည်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဖွားမြင်ရာအချိန်မှ (၆) နှစ်မျှအကြာတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပင်။ ရခိုင်စစ်မြေပြင် မေယုမြစ်ဝှမ်းတိုက်ပွဲများအတွင်း စွမ်းစွမ်းတမံတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုကို ဂုဏ်ပြုသည့်အားဖြင့် "မေယု " ဟု ခေါ်တွင် စေခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကာ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ရေယာဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား လက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လွှဲပြောင်းစဉ်က ဗြိတိသျှတော်ဝင် ရေတပ်မတော်မှ စစ်ရေယာဉ်မှူးမှာ ဗိုလ်မှူးမစ်ချယ်လ် (LIEUTENANT COMMANDER MITCHELL) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး စစ်ရေယာဉ်မှူးမှာ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်ဘို ဖြစ်လေသည်။
တို့ ဖြစ်ကြလေသည်။ အင်းစိန်မြို့ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး ရန်ကုန်မြို့ကို ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူရန် အင်းအားစုစည်းကြိုးပမ်းလာသော KNDO တပ်များအား ဗမာ့တပ်မတော်မှ အောင်ပွဲခံခဲ့သော တိုက်ပွဲတွင် ရန်သူ၏ ထိုးစစ်အဟုန်ကြောင့် ကြည်းတပ်ခံစစ်ကြောင်းများ အဆင့်ဆင့် ဆုတ်ပေးနေရချိန်တွင် ဗမာ့ရေတပ်မတော်မှ စစ်ရေယာဉ်မေယုသည် မြစ်ကြောင်းမှ (၄)လက်မ အမြောက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရေတပ်ပိုင် ဘီးတပ်(၄၀)မမ အမြောက်တပ်ဖွဲ့များသည် ကုန်းပေါ်မှလည်းကောင်း ဆီးကြိုဖြတ်တောက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရန်သူ့ဘက်မှ အကျအဆုံးများစွာဖြင့် အရေးနိမ့်သွားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတိုက်ပွဲတွင် ရေတပ်အနေဖြင့် စစ်ရေယာဉ်များအပြင် ကုန်းပေါ်မှလည်း ဘီးတပ်အမြောက် တံမြက်စည်း၊ ရေဘီလူး ၊ ရေသူရဲ၊ ရေသဘက် စသည်တို့ဖြင့် စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီး အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သမိုင်းဝင်၊ သမိုင်းတွင်သည့် နာမည်ကျော်တိုက်ပွဲများအပြင် (၁၉၅၈) ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း ဦးဆောင်သည့် အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်နှင့် (၁၉၆၂) ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်လာချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ (၁၉၇၄) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးနောက်တွင်လည်းကောင်း၊
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းခြင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ချစ်ကြည်ရေးသံတမန် "မေယု " -----------------------------------------
ထို့ကြောင့် စစ်ရေယာဉ်-မေယု သည် တပ်မတော်ရေတပ်အတွက်သာမက နိုင်ငံအတွက်ပါ သမိုင်းဝင်စစ်ရေယာဉ်တစ်စီးအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ "မေယု " ၏ နေဝင်ချိန်
တပ်တော်ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်း လှိုင်းဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ မုန်တိုင်းဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ် နှင့် လက်နက်ဒဏ်များကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်အံတုရင်း ပေးအပ်လာသည့် တာဝန်တိုင်းကို
"မေယု " ရေယာဉ်အား တပ်တော်ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့သည်။ တို့နောက်တွင်တော့ "မေယု " ရေယာဉ်အား အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေး၍ ဖျက်သိမ်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရန် စီမံခဲ့ပါသည်။ "မေယု " ကား သူပျော်မွေ့ရာ အဏ္ဏဝါရေပြင်နှင့်
(ခ )စစ်ရေယာဉ်အား မူလပုံစံမပျက်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းကြီး(၂)ရပ်ကို ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ကို ဦးစီးစက်မှုလက်မှုအရာရှိချုပ်(ရေ) ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်စေပြီး ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ "မေယု " အတွက် ကွန်းခိုရာ
"မေယု "စစ်ရေယာဉ်အား သမိုင်းဝင်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လွန်းကျင်းတည်ဆောက်ရေးနှင့် ရေယာဉ်အား မူလပုံစံမပျက် အနီးစပ်ဆုံးတူညီမှုရှိစေရန် ပြင်ဆင်မွမ်းမံရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပငွေများ သုံးစွဲခွင့်ရရှိရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးဌာနကောင်စီ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တွက်ချက်တင်ပြခဲ့ရာ (၂၅-၉-၈၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၃၁၁)ကြိမ်မြောက် ကာကွယ်ရေးဌာနကောင်စီ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခွင့်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းခွင့်ပြုချက်အရ စစ်ရေယာဉ်အား ထားရှိမည့် လွန်းကျင်းတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာရှာဖွေကြရာ သန်လျင်မြို့ နယ်ရှိ အမှတ်(၁)ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေးဌာနချုပ်နယ်မြေတွင် တည်ဆောက်ရန်သင့်တော်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရေလုံကျင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍
(HYDRO CIVIL WORKS) နှင့် (CIVIL WORKS) များ ဖြစ်သဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ဆိပ်ကမ်းကော်ပိုရေးရှင်း ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနတို့မှ အကူအညီများရယူ၍ လွန်းကျင်းတည်ဆောက်မှု၊
စမအ(၉၅၄) ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ခွဲ(အင်ဂျင်နီယာ) အနေဖြင့် အဆောက်အဦများ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း ၊ ရေမီးဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် လွန်းကျင်းတည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၈၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လတွင် ရေယာဉ်အား လွန်းတင်နိုင်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ရေယာဉ်လွန်းတင်ပြီးနောက် လက်ကျန်လုပ်ငန်းများနှင့် အချောသတ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၁၉၈၁-၈၂) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်တွင် လုံးဝပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ လွန်းကျင်းတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကုန်ကျ စရိတ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လေသည်။
============================ စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ ၂၁၀,၁၀၉,၇၇၅ "မေယု " ကို မူလပုံစံမပျက် ပြန်လည်မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း
အပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ရေယာဉ်အား မူလပုံစံမပျက် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ နိုင်ငံခြားငွေကျပ် (၄၈၆၄၀၀ိ/-) နှင့် ပြည်တွင်းငွေ ကျပ် (၉၇၀၈၂၅ိ - ၇၃ါး) နှစ်ရပ်ပေါင်း ငွေကျပ် (၁၄၅၇၂၂၅.၇၃ါး) ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍
လုပ်ငန်းကြီး (၂)ရပ်ဖြစ်သော ရေလုံသင်္ဘောကျင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စစ်ရေယာဉ်အား မူလပုံစံမပျက်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၄၅၅၈၃၂ ၃ိ - ၅၆ါး) ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရေး
(၃) မြစ်ကမ်းပါးအား ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းရပ်ကြီး(၃)ရပ်အား တပ်မတော်(ရေ)အစီအစဉ်ဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေသည်။ စစ်ရေယာဉ်"မေယု "အား သမိုင်းဝင် စစ်ရေယာဉ်ကြီးအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖန်တီးထားရှိနိုင်မှုနှင့် လွန်းကျင်းကြီးကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်မှုတို့မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသော ပညာသည်များ၏ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းပြည့်ဝမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ကြသည့် တပ်ဖွဲ့အသီးသီး ၊ ဌာနအသီးသီးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့၏ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ ရလဒ် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။ သမိုင်းဝင် စစ်ရေယာဉ်"မေယု " သည် အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးချို့ ယွင်းမှုများကြောင့် မြင်ကွင်းမှ ကွယ်ပျောက်သွားရမည့်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း ၄င်းစစ်ရေယာဉ်ကြီး၏ ထူးခြားပြောင်မြောက်သည့် စွမ်းဆောင်မှုတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းစဉ်တွင် ထင်ဟပ်လျှက် အစဉ်အမြဲ ရှိနေတော့မည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြရင်း သမိုင်းပေးတာဝန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် စစ်ရေယာဉ် "မေယု "၊၊ စစ်ရေယာဉ်မေယုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် ရေယာဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးနှင့် တပ်မတော်(ရေ) တပ်သားများအား ယနေ့ကျရောက်သော စစ်ရေယာဉ် "မေယု " ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဤစာစုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပါသည်။
တစ်နာရီ ရေမိုင် ၂၀ မိုင်နှုန်း သွားနိုင်သည်။ - အလေးချိန်- ၁၆၁၄.၉၁ တန် (၀န်ပြည့်)
- လူအင်အား- အရာရှိ (၈) ဦး ၊ အခြားအဆင့် (၁၃၅) ဦး (အချို့စာစောင်များတွင် အရာရှိ စစ်သည် ၈၅ဦး ဟု ဖော်ပြပါရှိ)
-၁၀၀ မမ အမြောက် ၁လက်၊ - ၄၀ မမ ဘော်ဖာ စက်အမြှောက်(၂) လက်၊
-၊မိုင်းရှင်းကိရိယာ၊ မိုင်းချ စင်များ - ရေမြုပ်ဒုံး (HEDGE HOG)
- ရေမြုပ်ဗုံး (DEPTH CHARGE) အထက်ဖော်ပြပါ လက်နက်များသည် ဝေဟင်ပစ်မှတ် ၊ ရေပြင်ပစ်မှတ် နှင့် ကမ်းခြေပစ်မှတ်များကို ထိရောက်စွာ ပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါသည်။
စစ်တုရင်ကစားနေသည့် လေသူရဲနှစ်ဦးမှာ ရိပ်သာရှေ့သို့ ဂျစ်ကားတစီးဖြင့်ရောက်လာသည့် အမှတ်(၁)အုပ်မှလေသူရဲ ဗိုလ်စံမြင့်ကြောင့် သူတို့၏ကစားပွဲကို ရပ်နားလိုက်ကြကာ ဂျစ်ကားပေါ်သို့ အလျင်အမြန် တက်ရင်း ဗိုလ်စံမြင့်ခေါ်ဆောင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းဆီသို့ အတွေးကိုယ်စီဖြင့် လိုက်ပါလာခဲ့ကြလေသည်။ ဗိုလ်စံမြင့်သည်လည်း ဗိုလ်ချစ်ခိုင်၊ ဗိုလ်ပီတာတို့ကဲ့သို့ တိုက်လေယာဉ်မောင်းနှင်ရသူလေသူရဲတဦးဖြစ်သော်လည်းကျိုင်းတုံတပ်ဆွယ်၌ အပေါ့စားခရီးသည်တင်လေယာဉ်(ဆက်စနာ) လေယာဉ်မောင်းနှင်မည့်သူ မရှိခြင်းကြောင့် အာဂန္တုစက်စနာလေယာဉ်မှူးကလေး ဖြစ်နေရရှာသူပင်တည်း....။ ဆောင်းအကုန်နွေအကူးကာလမို့ ဖုန်အလူးလူးထနေသည့် ရိပ်သာနှင့် လေယာဉ်ကွင်းကို ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားရာ မြေနီလမ်းကလေးထက်တွင် ဂျစ်ကားကလေးသည် ခုန်ပေါက်မောင်းနှင်ရင်း ကျိုင်းတုံလေယာဉ်ကွင်းဆီသို့ သူတို့ရောက်ခဲ့ပြန်လေပြီ.....။ လေဆိပ်အဆောက်အအုံရှေ့တွင်တော့ ဆီဖြူရီတိုက်လေယာဉ်သုံးစီးက တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်အနေအထားဖြင့် လက်နက် အစုံအလင် တပ်ဆင်ကာ သူတို့အား စောင့်ကြိုလျက်နေပေပြီ။ အမှတ်(၅၀၁)လေတပ်စခန်း၏ တပ်မှူးတာဝန်နှင့် အမှတ်(၁)တိုက်လေယာဉ်အုပ်၏ အုပ်မှူးတာဝန်တို့ကို ပူးတွဲတာဝန်ယူထားသည့် ဗိုလ်မှူးတင်မောင်အေးကိုလည်း တိုက်လေယာဉ်တစီး၏နံဘေးတွင် ဗိုလ်မောင်သိန်း(လေ/၁၂၀၁) နှင့်အတူ ရပ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ စစ်ဆင်ရေးဝတ်စုံကို အသင့်ဝတ်ထားသည့် ဗိုလ်မောင်သိန်း၏လက်ထဲတွင်တော့ လေကြောင်းသုံးမြေပုံတချပ်.....။ ယနေ့နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီအချိန့်ခန့်ကပင် ဗိုလ်မှူးတင်မောင်အေး နှင့် ဗိုလ်မောင်သိန်းတို့နှစ်ဦးသား ကျိုင်းတုံလေယာဉ်ကွင်းမှနေ၍ တာချီလိတ်သို့ ဆက်စနာလေယာဉ်တစီးဖြင့် ထွက်သွားခဲ့ကြသည်။ တာချီလိတ်လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း၌ ခေတ္တ
ဝမ်ပန်းဆန်းရွာအထက်ကောင်းကင်ယံတွင် နာရီဝက်ကျော်မျှကြာအောင် ပျံဝဲနေကြရင်း ညနေ(၁၆း၀၅)နာရီတွင်တော့ အရှေ့အရပ်ဆီမှ အင်ဂျင်လေးလုံးတပ် အစိမ်းပုတ်ရောင် လေယာဉ်ပျံကြီးတစီးသည် ဝမ်ပန်ဆန်းရွာထက်ဆီသို့ ဦးတည်ပျံသန်းလာနေသည်ကို ဗိုလ်ပီတာ စတင်တွေ့မြင်လိုက်ရပြီး အုပ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မောင်သိန်းထံသို့ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစက်မှတဆင့် သတင်းပို့လိုက်တော့သည်။ စောင့်ရကျိုး နပ်လေပြီ.........။ ဗိုလ်ပီတာထံမှ သတင်းပေးပို့ချက်ကိုရရှိသည်နှင့် ဗိုလ်မောင်သိန်း၏မျက်လုံးများက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် ရန်သူ့လေယာဉ်ကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေနေမိသည်။
ဗိုလ်မောင်သိန်းတို့ဖက်မှ အသာစီးရနေပေသည်။ ပထမဦးဆုံး ဗိုလ်မောင်သိန်း၏ တိုက်လေယာဉ်ထိုးဆင်းသွားပြီး လေယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် ၂၀ မီလီမီတာ Hispano စက်သေနတ်ဖြင့် ရန်သူ့လေယာဉ်၏ ဘယ်ဘက်အင်ဂျင်နှစ်လုံးကို စတင်ကာ ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)၏ ပထမဦးဆုံးသော လေကြောင်းစီးချင်းထိုးမှုသမိုင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တော့သည်.......။
Hispano နှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတအနေဖြင့်ဆိုရသော် ၄င်းမှာ စက်သေနတ်လည်းမက၊ အမြှောက်လည်းမကျသည့် စက်အမြှောက်ဟုပင် ဆိုရချိမ့်မည်။ သာမန် စက်သေနတ်များကဲ့သို့ ရိုးရိုးဖောက်ထွင်းကျည်များသာမက တဆင့်ထပ်မံပေါက်ကွဲစေသည့်ကျည်များလည်းပါဝင်သဖြင့် ထိုလက်နက်ကို စက်အမြှောက်ဟု ခေါ်ခြင်းပင်။ ထိုသို့သော ဟစ္စပါနိုစက်အမြှောက်များသည် ဆီဖြူရီလေယာဉ်တောင်ပံတဖက်လျှင် နှစ်လက်နှုန်းဖြင့် လေယာဉ်တစီးတွင် လေးလက်စီ တပ်ဆင်ထားလေသည်။ ပစ်ခတ်မှုကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး စက်သေနတ်တလက်လျှင် ကျည်ဆန်အရေအတွက် (၁၂၅) တောင့်ပါရှိလေသည်။ ကျည်ဆန်သုံးတောင့် (သို့တည်းမဟုတ်) ငါးတောင့် ပစ်ခတ်ပြီးသည်နှင့် မီးလမ်းပြကျည် (Tracer) တတောင့်နှုန်း ထွက်စေရန် စီမံထားသဖြင့် လေသူရဲအနေဖြင့် ကျည်သွားလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့နိုင်လေသည်။
ပွိုင့်(၃၁၁၅)နှင့် ဝင်းမနော်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး မိုင်းပါလျှိုတွင်တပ်စွဲထားသော အမှတ်(၃) သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း သနက(၃)ထံမှ နယ်မြေတာဝန်လွှဲပြောင်းလက်ခံထားသည့် တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်းတရင်းသည် ထိုနေ့၏ ည (၂၀း၀၀)နာရီတွင်တော့ တပ်ရင်းတရင်းလုံး တာချီလိတ်မြို့သို့ အမြန်ဆုံးချီတက်ရန်ဟူသော ကြေးနန်းပေးပို့ချက်တခုကို လက်ခံရရှိခဲ့လေတော့သည်။ တပ်ရင်းမှ တပ်ခွဲများကို ကုန်းလမ်းအတိုင်း မိုင်းပါလျှိုမှ တာလေသို့ချီတက်စေ၍ တာလေမှ တာချီလိတ်သို့ ယာဉ်တန်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုတပ်ရင်း၏ တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်သောင်းကို အော်တာ လေယာဉ်ဖြင် မိုင်းပါလျှိုးမှ တာချီလိတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုတပ်ရင်း ထမ်းဆောင်ရမည့် အဓိကတာဝန်မှာ ညနေပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လေကြောင်းစစ်ပွဲတွင် ပျက်ကျသွားသည်ဟု ယူဆထားသည့် တပ်မတော်(လေ)မှ ဆီဖြူရီတိုက်လေယာဉ်နှင့် လေသူရဲဗိုလ်ပီတာ၊ ပစ်ချခံလိုက်ရသည့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ရန်သူ့ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကြီးတို့ကို ရှာဖွေရန်ပင် ဖြစ်လေတော့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆)ရက်နေ့တွင်တော့ ထိုစဉ်က ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေေ သာ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး ကျိုင်းတုံမြို့သို့ ရောက်
နိုင်ငံတော်မှ“သူရဘွဲ့”ကို ချီးမြှင့်လျက် ထိုက်တန်စွာ ဂုဏ်ပြုခဲ့လေသည်။ နိုင်ငံ၊လူမျိုး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပိုင်နက်နယ်မြေအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်ရင်း အသက်စွန့်လွှတ်သွားခဲ့ရရှာသည့် အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ်၊ ဒုတိယဗိုလ် ပီတာ၏ ဂုဏ်သတင်းကား မြန်မာပြည်တွင်း၌သာလျှင် မကပဲ ကမ္ဘာကပင်လျှင် ချီးကျူးဂုဏ်တင်ခဲ့ခြင်းကို ထိုခေတ်၊ ထိုကာလက ထုတ်ဝေခဲ့သော “The Times” စာစောင်တွင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပေသည်။
"Farewell to A HERO Pilot Noel Peters, 26-year old son of Mr. and Mrs. Peters, who died in action in an air engagement withaKMT supply plane on Feb 15, 1961. Leaving the university in 1953, Pilot Peters was admitted into the Burma Air Force (BAF) asaHatton apprentice, and proceeded to England of that year for training with the Royal Air Force (RAF). He passed all subjects with flying colours and was awarded the Robinson gold medal for having stood first in the written examinations. He won his wings in the BAF in July 1959 and posted to the BAF no.501 Wing at Hmawbi. He was promoted pilot on Jan 25, 1960. Pilot Peters will be buried tomorrow (Tuesday) at the Dahnyingon Military Cemetery, following services at the Mingalardon Roman Catholic Church. Credited to uncle Richard Aung Myint, DSA 1st batch, BAF-1271 15th Feb 1961 The Hawker Sea Fury (Burma AF-UB 466), piloted by Noel Peters, was interceptingaCNAF P4Y-2 privateer which was dropping supplies to KMT forces in Northern, Burma. Peters shot down the P4Y-2 but was hit by return fire and crashed, losing his life." “The Times” Press Report ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလတွင်လည်း တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်အတွင်းရှိ တပ်မတော်(လေ)ပြခန်းအတွင်းဝယ် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့လေသော လေသူရဲအရာရှိငယ် ဒုတိယဗိုလ်ပီတာအား အမှတ်ရစိမ့်သောငှာ အတိတ်ကာလဆီမှ လေကြောင်းစီးချင်းထိုးပွဲ ပုံစံတူရုပ်ပုံများ ပြုလုပ်ခင်းကျင်းပြသထားရှိပေသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ သမိုင်းမှတ်တိုင်များ ကုန်ဆုံးကျော်လွန်ခဲ့သော်လည်း ဒညင်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်မတော်စစ်သချီင်္ုင်းတနေရာတွင်
Posts 3,854	Thanks 59,045
1/(ppfESvkH;*sme,f twGJ 2? trSwf6- 1949 ckESpf pufwifbmv) 2/wuúodkvfwifpdef - atmifqef;ol&d,AdkvfwdkufcsGef;
London Gazette udkvJ uRefawmf tcsdeftukefcH&SmazGjyD; Burma Gallentary Medal (BGM) tygt0if jAdwdoQtpdk;&rS ay;tyfwJh bGJU? wHqdyfawG tawmfrsm;rsm;udk pm&if;vkyfxm;cJhwmudkvJ usL;ypf wpfa,mufudk ay;zl;w,f/ London Gazette rS pm&if;rsm;/ vGwfvyfa&;&jyD;uwnf;u ay;tyfcJhwJh *kPfxl;aqmif bGJU? wHqdyf wdkU&JU pm&if;tjynfhtpkHudk pkaqmif;xm;wm ..... a[m'D usL;ypfu (udkvlacsm) wpfa,mufyJ &Sdygw,f/ usL;ypfrSm (udkvlacsm) qdkwm emrnfwvkH; eJUaecJhwmyg/
Chasing My Dreams ! Join Date Jun 2006
Posts 2,403	Thanks 29,878
Thanked 36,971 Times in 2,385 Posts
tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG4OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ အဲ့ဒီပို့စ်ကို ပြန်ဖျက်ပေးရမယ်ဆိုလည်း ပြန်ဖျက်ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။ အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းပို့စ်မှာ ဖြည့်စွက်ရေးသားပေးတဲ့ ကိုလူချောကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
သို့ချီတက်ရာ လမ်းခုလတ်တွင်တော့ မိမိတို့ တပ်မတော်တပ်ရင်းမှာ တောင်ထိပ်မှ စိတ်ရှိတိုင်း ပစ်ခတ်နှုတ်ဆက်နေသည့် ရန်သူ့ လက်နက်ငယ်နှင့် လက်ပစ်ဗုံးဒဏ်ကို အလူးအလဲ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ တောင်ပေါ်စစ်ဆင်ရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်နေသဖြင့် မိမိတို့အတွက် တပ်ဖြန့်ရန်ခက်ခဲသလို မြင်ကွင်းလည်း ကျဉ်းမြောင်းလို့နေပြန်သည်။ တောင်ထိပ်တွင် နေရာယူစိုးမိုးထားသည့် ရန်သူ့အတွက်တော့
စစ်သည်များ တနေရာမှ တနေရာသို့ နေရာယူ ရွှေ့ပြောင်းမှု အရိပ်အယောင်ကို မြင်သည်နှင့် လက်ပစ်ဗုံးများက ရုတ်ခြည်း ကျရောက်လို့လာတတ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လှုပ်ရှားစစ်ကစားမှုပြုလုပ်ရန်ထက် အသက်ခန္ဓာ အိုးစားမကွဲရန်အတွက် ဦးစားပေးကာကွယ်နေရသည်။ လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်သည်နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင် လက်ပစ်ဗုံးများ ကျရောက်လာတတ်ပြီး မိမိတို့ဘက်မှ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို
တောင်ခြေမှတပ်မတော်စစ်ကြောင်း၏ လှုပ်ရှားမှုကိုမတွေ့ရလျှင် တောင်ထိပ်မှ ကျေးဇူးရှင်များက တနည်းတဖုံ ဒုက္ခပေးတတ်ကြပြန်ပါသေးသည်။ မိမိတို့စစ်ကြောင်း၊ စစ်သည်များ နေရာယူထားသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့်နေရာများသို့ ကျည်ခွံများ၊ ခဲလုံးများကို တောင်ထိပ်မှနေ၍ လှမ်းပစ်တတ်ကြသည်။ ပစ်နေကျ လက်ပစ်ဗုံးသံဟု ထင်မှတ်ကာ ရွှေ့ပြောင်းနေရာယူလိုက်မိသည့် စစ်သည်များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို မြင်တွေ့လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းမှာပင် ထိုနေရာသစ်ဆီသို့ လက်ပစ်ဗုံးများတဖွဲဖွဲ ကျရောက်လို့ လာပေတော့၏.....။ တခါတရံတွင်တော့ သူတို့၏ နှုတ်ဆက်ပုံ၊ နှုတ်ဆက်နည်းက ပို၍ ပြင်းထန်လှသည်။
ခြေထောက် ရရာ၊ မြင်ရာကို လှမ်းပစ်တတ်သည့် လက်ဖြောင့်ခေါ် စနိုက်ပါ (Sniper) တပ်သားများ၏ အန္တရာယ်ကလည်း မသေးလှ။ ကျည်ကွယ်၊ မျက်ကွယ်နည်းပါးလွန်းပြီး ချွန်တက်တက်၊ အဖုအထစ်များ နေရာတကာ ကြီးစိုးထားသည့် ဤ ပွိုင့်(၁၇၇၈) ကျောက်တောင်ကုန်းတွင် ညီညာပြန့်ပြူးသော မြေပြင်ဟူသည် ဆယ်ပေပတ်လည်မျှပင် မရှိ။ ရနိုင်သမျှသော ကျည်ကွယ်ရာ နေရာများတွင် ကျားကုတ်ကျားခဲနေရာယူထားကြရင်းမှပင် တောင်ထိပ်ဆီမှ ရန်သူ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအောက်တွင် သေနတ်သံတချက်လျှင် တယောက်ခန့်မျှ၊ ဗုံးသံဝုန်းခနဲ တကြိမ်ကြား
ဟု အမည်မှည့်ကြပြန်တော့သည်။ အနှီ ဘရာစီယာကုန်းမှ အရှေ့အရပ်သို့ တောင်ကြောအတိုင်း ဆက်လက်ခရီးနှင်ပါလျှင် မဲသဝေါဒေသတခွင်တွင် လူသိများထင်ရှားလှသော အံ့ကျော်ကုန်းစခန်းသို့ ရောက်မည် အမှန်ပေတည်း။ ထိုအံ့ကျော်ကုန်းစခန်းတည်ရာအရပ်သည် သောင်ရင်းမြစ်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသဖြင့် ရိက္ခာ၊ ခဲယမ်း နှင့် အခြားသော အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုများကို စက်လှေများအသုံးပြုကာ ပြုလုပ်နိုင်လေသည်။ ထိုအံ့ကျော်ကုန်းကို ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့၏
အံ့ကျော်၏ အမည်နာမကို အစွဲပြုကာ တပ်မတော်သားများက အံ့ကျော်ကုန်းဟု မြန်မာဘာသာဖြင့် အမည်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ပွိုင့် (၁၇၇၈) စခန်းကုန်းနှင့် အံ့ကျော်ကုန်းတို့မှာ တဆက်တစပ်တည်း တည်ရှိနေကြပြီး ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ထိုစခန်းကုန်းများမှာ မူလက တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ တပ်စွဲနေရာယူထားခဲ့ပြီး (၁၉၈၈)ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ရန်သူ့အင်အား(၂၀၀၀)ကျော်၏ ပြင်းထန်သော ထိုးစစ်ကြောင့် အင်အားချင်းမမျှတသဖြင့် စွန့်ခွာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပေတော့သည်။
အချက်အလက်များအားလုံးကို facebook နှင့် google မှ ရယူသည်။ toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG5OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf